I-China engenanto ye-Acrylic Jar kunye ne-Bottle Set- E315 umzi-mveliso kunye nabanikezeli |Sengmi
Inombolo yomzekelo: E315
Ingqayi yePlastiki eNcinciweyo ayinanto kunye neSeti yeBhotile
Yenziwe ngezinto ezi-Akriliki, ubungqina bokuvuza, yomelele
Izikhongozeli ezigqibeleleyo zekhrimu kunye nelotion.
Ixabiso Ngenye:MOQ 3000pcs
I-E315 I-Acrylic Jar kunye ne-Bottle Set
Izinto eziphathekayo acrylic
Ubunzima kunye nokuPakisha Ipakishwe kwiseti epheleleyo okanyengokwahlukeneyonjengesicelo.
Ngokuqhelekileyo i-MOQ3I-000pcs, inokuvelisa nawuphi na umbala, i-50% ye-Deposit, ixesha lokukhokela i-Factory 25-30days.
Inkxaso yesampuli Ukubonelela ngesampulu yesitokhwe sangaphambili simahla, Ukuthumela kwangaphambili okanye kuqokelelwe ngumthengi, ngokuqhelekileyo i-15- 20USD.
Le ngqayi ye-acrylic ingasetyenziselwa ukugcina i-cream cream, i-eye cream, i-glitter powder, i-scrub yomzimba, i-lip balm, ibhotolo yomzimba, ijeli yobuhle bezipho, i-ointments, i-salves njalo njalo.
Iibhotile zingasetyenziselwa ukugcina i-lotion, i-serum kunye nezinye iimveliso ze-skincare.
I-liner yangaphakathi kunye ne-screw isiciko se-jagi inceda ukudala itywina eliqinileyo elinokukhusela iimveliso ezingaphakathi kwengqayi ukuba zingangcoliswa.
Eli tyala lenziwe kwizinto ze-ABS, ezinokuphinda zisetyenziswe kwaye zisebenziseke, kwaye zinegalelo elikhulu kwisakhiwo esiluqilima setyala.
Le ngqayi kunye neseti yebhotile inokwenziwa ngokwezifiso, sinokwenza umbala, iilogo kunye neemilo zejagi ukuxhasa izimvo zakho ezintsha kunye nokuyila.
Ukhetho loLungiselelo kunye nokuhanjiswa ngokukhawuleza
Sixhasa ukuthunyelwa ngenqanawa zombini ngoLwandle nangoMoya.
Sikholisa ukucebisa abathengi bethu ukuba bathumele iimpahla ngoMoya ngezixa ezincinci zobungakanani, ngelixa xa kufikwa kwisixa esikhulu sempahla, ukhetho loLwandle lubonakala lunokwenzeka ngakumbi ukuze kuthotywe ixabiso kwaye kwandiswe izibonelelo.
Nceda usithumelele ikhowudi yakho ye-zip kwaye usixelele ubungakanani obudingayo ukujonga iindleko zokuthumela kunye neyona ndlela yokuhambisa.
Ngaphambili: I-Empty Round yeGold Acrylic Jar yeCream
Okulandelayo: IJar yePlastiki yeCream engenanto eJikeleyo kabini
Airless Black ibhotile, Ingqayi engenamoya, Ibhotile engenamoya eNtofontofo, Ibhotile yesirinji engenamoya, 60ml Airless ibhotile, Ibhotile yeToner yesilwanyana,